Abaalmarinta Caddaaladda - Hub sida wax Xun u Gumaada
Argagixisada doonaysa in ay helaan iyo in ay isticmaalaan hubka burburka culus geysta (WMD) waxay khatar culus ku yihiin amniga iyo nabadgelyada caalamka. WMD wuxuu dili karaa shacab farabadan waxayna culaab ku noqon karaan cutubyada loogu talagalay xaaladaha degdegga ah. Waxaa WMD ka mid ah hubka niyukliyarka, kiimikada, bayoolojikada, iyo shucaaca, iyo weliba bambooyinka quwadda weyn ee burburka ballaaran geysan kara.
Mareykanka wuxuu awoodda saarayaa in uu ka hortago in argagixisada ay isticmaalaan hubka burburka weyn geysta.
Haddii aad soo gudbiso warbixin suurageliso in la xiro ama in xukun la saaro dadka ku kaca, isku daya ama ka qayb qaata, ama ka caawiya iyo taageera dhacdooyinka argagixiska caalamka ee hubka WMD u adeegsada shacabka ama hantida caalamka ee Mareykanka, waxaa suuragal ah in aad abaalmarin u qalanto.
Fiiro Gaar ah: Wixii warbixin been ah ee si ku talagal ah loo soo gudbiyo ayaa waxaa lagu wargelin doonaa maamulka ku haboon.
15-kii Luulyo, 2006, Madaxweyne Bush iyo Madaxweyne Putin waxay billaabeen Ololoha Caalamka ee Lagula Dagaallamo Argagixiska Niyuukliyarka. Ujeeddada ololaha waa in la ballaariyo iyo dhiirigeliyo iskaashiga la dagaallanka khatarta caalamka ee argagixiska niyuukliyarka.
Shakhsiyaadka soo socda waxaa lagu eedeeyay isticmaalka, ama ka qayb qaadashada adeegsashada, hubka WMD.
Jamal Mohammad al-Badawi
Haddii aad doonayso in aad macluumaad dheeraad ah ka hesho shakhsiyaadkan iyo argagixisada la raadinayo, waxaad fadlan eegtaa bogga Argagixisada La Raadinayo.